डीटीजी Gar प्रत्यक्ष गर्न गारमेन्ट प्रिन्टिंग एक आधुनिक प्रत्यक्ष विधि हो
डीटीजी प्रिन्टिंग - प्रत्यक्ष सजावटको एक आधुनिक विधि
डीटीजी प्रिन्टिंग वा "गार्मेन्ट टु गार्मेन्ट" हो आधुनिक विधि कपडा र कपडाको सीधा सजावट। डीटीजी टेकनीकले तपाईंलाई कपास कपडा वा कपासमा कुनै पनि ग्राफिक्स लागू गर्न अनुमति दिन्छ इलेस्टेन / भिस्कोसको मिश्रणको साथ। ग्राफिक्स विशेष प्रिन्टर प्रयोग गरी सिर्जना गरिएको हो। हाम्रो मेशिन पार्कमा भएको उपकरणहरू सबैभन्दा नयाँ प्रिन्टर मोडल हुन् भाई GTXpro थोकजुन, औद्योगिक हेड्सलाई धन्यवाद, द्रुत रूपमा सामग्रीमा प्रिन्ट गर्दछ। डीटीजी टेकनीकको साथ मुद्रण सक्षम गर्दछ र color्ग ट्रान्जिसनको साथ उत्तम रंग प्रजनन। प्रोजेक्ट तयार नगरी मुद्रण सम्भव छ केवल एउटा टुक्रा बाट.
डीटीजी विधि प्रयोग गरेर टि शर्टमा फोटो प्रिन्ट गर्दै
डीटीजी मुद्रणको स्थायित्व धेरै तत्वहरूमा निर्भर गर्दछ। सबैभन्दा पहिले, मोडेल र यसका प्यारामिटरहरू - नयाँ उपकरणहरू, अधिक राम्रो गुण र उत्पादकत्व। स्थायित्वलाई असर गर्ने अन्य कारकहरू प्रयोग गरिएको पेन्टको प्रकार हुन्, जुन कपडामा प्रिन्ट गरिन्छ र कामदारको सीप।
हाम्रो भाई GTXpro बल्क प्रिन्टरले यो सम्भव बनाउँदछ .40,6०..53,3 सेमी x .XNUMX XNUMX..XNUMX सेमी अधिकतम आयामहरूको साथ प्रिन्ट गर्नुहोस्। लागत र मर्मत समय घटाउनु भएकोमा धन्यवाद, छिटो प्रिन्ट गर्नका लागि मेशीन तयार गर्न र काममा अवरोधहरूको संख्या कम गर्न सम्भव छ। उपयुक्त टाउको उचाई मुद्रण प्रक्रिया रोक्छ मात्र जब फिडर खतरनाक रूपमा टाउको नजिक छ, तर टाउको र फिडर बीच धेरै ठूलो दूरी को लागी संवेदनशील छ, जो सधैं उच्च प्रिन्ट गुणस्तर ग्यारेन्टी गर्दछ। नयाँ, सुधार गरिएको सेतो मसी टाउकोले नोजलहरूको बढेको संख्याको साथ १०% छिटो प्रिन्टिंग मोड प्रदान गर्दछ। यो बदलेमा, ग्राहकको लागि छोटो अर्डर प्रसंस्करण समयमा अनुवाद हुन्छ।
डीटीजी प्रत्यक्ष प्रिन्टर
डीटीजी मुद्रणको व्यापक संभावनाहरू
नयाँ डीटीएक्सप्रो बल्क प्रिन्टर लचिलो र अत्यन्त बहुमुखी मोडल हो। यसले सामूहिक उत्पादन क्षमताहरू प्रदान गर्दछ, यसलाई जन-आदेश पूर्तिको लागि आदर्श बनाउँदै।
स्टोर र एजेन्सीहरू: GTXpro स्टोर, विज्ञापन एजेन्सी, संस्था, क्लब र कार्यस्थलहरूको लागि वर्गीकरण तयार गर्नका लागि एक आदर्श समाधान हो। डीटीजी टेक्नोलोजी लचिलो र कम्प्याक्ट छ। यसको लागि धन्यबाद, तपाईं व्यक्तिगत गोदामहरू जस्ता आफ्नो गोदाम विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ टी-शर्टहरू सबैको लागि उसको नाम, रोजगार शीर्षक, विज्ञापन झोलार आफ्नै कलाकृति संग जुत्ता पनि। पर्सनलाइजाजा यो ब्रान्डको साथ प्रयोगकर्ताको पहिचानको पक्षमा छ, जसले यसलाई प्रभावित गर्दछ सकारात्मक छवि र विश्वास वृद्धि.
स्वयंसेवक टीम टी-शर्टमा डीटीजी प्रिन्ट गर्नुहोस्
ग्रुप र व्यक्तिगत उपहारका लागि आईडियाहरू: क्रिसमस, ईस्टर, जुबलीहरू, पेशेवर सफलताहरू, मातृ दिवस वा बाल दिवस अवसरहरू उपहारहरू तयार गर्नका लागि सबैभन्दा लोकप्रिय अवसरहरू मात्र हुन्। अधिक व्यक्तिगत, कहिलेकाँही व्यक्तिगतकृत - राम्रो प्रभाव र निश्चित रूप मा मजबूत स्थिति। कर्मचारीहरुका लागि कम्पनी उपहार वा जुबली उपहार रूपमा प्रतियोगितामा पुरस्कार एक ठूलो अवसर तस्विर तताउने। बदलेमा, उपहार, विशेष गरी व्यावहारिक व्यक्तिहरू, जस्तै कम्पनीको अस्तित्वको २० औं वार्षिकोत्सवको लागि वा कम्पनीलाई प्राप्त पुरस्कारको प्रतीकको रूपमा तौलिए एक उत्कृष्ट ग्याजेट हुनेछ। साझेदार र सम्भावित ग्राहकहरूको लागि DLA कम्पनीको स्थितिमा जोड दिनुहोस् प्रतिस्पर्धाको बिरूद्ध.
बदलेमा, एउटा टुक्राबाट प्रिन्ट गर्ने सम्भावनाले विशेष दिनमा विशेष कसैको लागि मौलिक उपहार तयार गर्ने विकल्प खोल्दछ। आफ्नै आविष्कार, र उच्च गुणवत्ताको सहभागिताको साथ सिर्जना गरिएको उपहारले सम्मानित व्यक्तिगत रिपोर्टहरूले धेरै वर्षको लागि रमाईलो सम्झनाहरू छोड्नेछ। GTXpro ले तपाईंलाई उत्पादनमा लचिलो रहन अनुमति दिन्छ, हामीलाई अर्डरमा परिवर्तन गर्न छिटो र आर्थिक प्रतिक्रियाको अवसर दिन्छ।
डीटीजी प्रिन्टिलाई प्रोजेक्ट तयारीको आवश्यक पर्दैन, जुन यसको मुख्य फाइदाहरू मध्ये एक हो (जसरी स्क्रिन प्रिन्टि or वा केसमा हो कम्प्युटर कढ़ाई)। यसको कार्यान्वयन ग्राहकको फाइलबाट सिधै सम्भव छ, जुन तदनुसार समायोजित हुनुपर्दछ। यो एक टुक्राबाट प्रिन्ट गर्न सम्भव छ, जसले तपाईंलाई यो गर्न अनुमति दिन्छ परीक्षण प्रिन्ट ठूलो मात्रा बनाउनु अघि। पनि फोटो प्रिन्ट गर्नुहोस् यो सम्भव छ, तर यो महत्त्वपूर्ण छ कि यो उच्चतम रिजोलुसनमा सम्भव छ।
स्थिरता: यो एक ठूलो लाभ हो उच्च स्थायित्वयदि यो पेशेवर उपकरण मा बनाइएको छ। अधिक आर्थिक अपरेशनको लागि नयाँ सुधारहरूको प्रयोगको लागि अनुमति दिन्छ मुद्रणको तुलनात्मक रूपमा कम लागत। सामग्री कपास वा भिस्कोसको मिश्रण वा इलेस्टेनको हुनुपर्दछ, तर यो धेरै स्ट्रेच नहुनु महत्त्वपूर्ण छ।
निर्माताको सिफारिसहरूको अनुसरणले हामीलाई लामो समयको लागि हाम्रो प्रोजेक्टको प्रभावको आनन्द लिन मद्दत पुर्‍याउँछ। हाम्रो टीमको सहयोगका लागि धन्यवाद, तपाईं सजावट को तरिका समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईं हाम्रो मा सबै भन्दा उपयुक्त उत्पादनहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ पसल.
डीटीजी प्रिन्टिंगकपडामा मुद्रणबैगमा डीटीजीडीटीजी सस्तोप्रिन्टको साथ ग्याजेटहरूप्रिन्टको साथ टी-शर्टहरूप्रत्यक्ष मुद्रणग्राफिक्स र शिलालेखहरूको मुद्रणकम्पनी लोगो प्रिन्टस्वेटशर्टहरूमा प्रिन्ट गर्नुहोस्टी-शर्टमा प्रिन्ट गर्दैकार्यक्रमको लागि टि-शर्टमा प्रिन्ट गर्दैकपडामा प्रिन्ट गर्नुहोस्कम मूल्यमा लुगामा मुद्रणटी-शर्टमा प्रिन्ट गर्दैझोलामा मुद्रणएक टुक्रा बाट मुद्रणपरीक्षण प्रिन्टफोटो प्रिन्टिंगप्रतियोगिताको लागि पुरस्कारकर्मचारीहरु को लागी प्रिन्ट संग लुगाहजुरआमा को लागी उपहारहजुरबुबा को लागी उपहारमहिलाको लागि उपहारआमालाई उपहारएक मानिस को लागी उपहारएक साथी को लागी उपहारएक साथी को लागी उपहारबहिनीलाई उपहारबुबाको लागि उपहारक्रिसमस उपहारवर्धापन दिन उपहारजन्मदिनको उपहारकर्मचारीहरुलाई उपहारव्यक्तिगत उपहारछुट्टिको लागि उपहारनिजीकृत उपहारसस्तो मुद्रणसस्तो प्रिन्टस्थायी लोगो मुद्रणटी शर्टमा आफ्नै प्रिन्टकपडामा आफ्नै प्रिन्ट